Abakhiqizi be-Luminescent Ceramics - Abahlinzeki bezinto zokuthambisa zase China (Luminescent ceramics & Factory)
I-Holistic luminescence pebble mosaics I-Luminous Pebble itshe kanye ne-mosaic ekhanyayo ye-mosaic ekhanyayo: Lo mosaic wenziwe ngokukhanya kwethu ngamatshe amnyama, i-cobble yokufakelwa ekhanyayo iyi-glaze njengezinto ezingavuthiwe, engeza izinto ezikhanyayo ngokusebenzisa ubuchwepheshe obukhethekile bokucubungula. Ukwakheka kwe-cobblestone njenge-cobblestone, osayizi, kuumbwa ngokucebile hhayi nge-monotonous. Kuyinto non-enobuthi akukho imisebe yokuvikela imvelo impahla, angakwazi ...
I-Luminous pebble mosaic tile Ukukhiqizwa okwenziwe ngokwezifiso, okokuzithandela, okulungele kakhulu iphrojekthi yakho ekhanyayo ekhanyayo yamatshe amatshe obumba: Le tile yokukhanya ekhanyayo yenziwa ngokukhanya kwethu ngamatshe amnyama, amatshe abunjiwe okufakwayo okukhanya okufakwayo okuba izinto ezingavuthiwe, ezingeze izinto ezikhanyayo ngokusebenzisa ubuchwepheshe obukhethekile bokusebenza. Ijamo le-cobblestone elisicaba njenge-cobblestone, osayizi, licebile futhi alisiyisi-monotonous. It is a non-enobuthi akukho imisebe ukuvikelwa kwemvelo materia ...
Imibala ekhanyayo yengilazi ekhanyayo emifanekisweni emnyama yengilazi ekhanyayo Imibala emisha yesikhathi eside ebusuku, i-economise emandleni nasekuvikelweni kwemvelo, Lokho kukhombisa umbala wemvelo wemvelo ngesikhathi sasemini noma isimo esindayo esikhanyayo, umbala okhanyayo nombala omhlophe otholakalayo, ungakhanya nohlaza okwesibhakabhaka nokuluhlaza okwesibhakabhaka njll. Bangakwazi ukugcina ukukhanya ebumnyameni amahora angama-8 kuya kwe-12 ngemuva kokumunca cishe imizuzu eyi-15-25amin ngaphansi kokukhanya kosuku noma ukukhanya okuqinile. Kukhanya ngokuphelele vumela isikhala singabonakali ...
I-Ceramic tile ekhanyayo ingumkhiqizo okhanyayo ongasetshenziswa njengezimpawu zokuphepha kanye nemihlobiso yesakhiwo. Ukusetshenziswa kwendawo ehlukile kungaba odongeni, phansi, izitebhisi kanye nomsebenzi wobuciko egalari. Iningi le-ceramic yethu ekhanyayo nayo ilungele ukwakha okwayihlanganisa inqubo yendabuko yokusebenza nobuchwepheshe besimanje. Babonisa umphumela wokukhanya okungapheli, i-antiseptic, okuhlala isikhathi eside, nokuqina kwamakhemikhali. Ngemuva kokumunca ukukhanya okuthile okubonakalayo njengokukhanya kwelanga okuqondile imizuzu eyi-10 ukuya kwe-20, bese ukhazimula ngokuzenzakalela amahora angama-8 ~ 12hours. imikhiqizo ayisiyo njongo yomhlobiso kuphela kepha icubungula nokuphepha.
I-Luminous Pebble Tile Lullous Pebble Tile enomdwebo obunjiwe we-peable eyenzelwe umhlobiso wokunethezeka osezingeni eliphakeme usetshenziselwa umhlobiso wodonga noma wehholo, igumbi lokugezela, igumbi lasekhishini, noma iklabhu ekhethekile, umhlobiso webha yasebusuku njll. ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene. Amaphoyinti athengisa kakhulu: Ukwakheka kwe-Smart pebble kanye nokukhazimula ebumnyameni Ukucaciswa Okuyisisekelo Igama tile ekhanyayo yamatshe tile Uhlobo lomdwebo wesithombe esisebekile ubukhulu obudumile 30 ...
Itshe Eliyinqaba Lubumba kanye nobucwebe be-mosaic ekhanyayo ekhanyayo: Lo mosaic wenziwe ngokukhanya kwethu ngamatshe amnyama, ukukhanya okufakwayo okukhanyayo kungokukhanya njengezinto ezingavuthiwe, engeza izinto ezikhanyayo ngokusebenzisa ubuchwepheshe obukhethekile bokucubungula. Ukwakheka kwe-cobblestone njenge-cobblestone, osayizi, kuumbwa ngokucebile hhayi nge-monotonous. Akuyona into enobuthi engavikeleki ngemisebe yokuvikela imvelo, angangena kwi-aquarium yezimbali ne-bonsai, futhi angenziwa ku-mosaic eyenziwe isetshenziswe njenge-wa ...